Khaatumada ALLAAH ha noo suubiyo!!!.
Monday October 22, 2018 - 21:23:04 in Wararka by Mogadishu Times
Khaatumada ALLA ha noo suubiyo,markaan leeyahay, Runtii, waxaan soo xasuustaa, Gabar Somali ah ayaa waxa ey jeclaatay Oday Talyaani ahaa.waxa uu Ku yiri: haddaad jeceshahay in aan Ku guursado soo gal Diinta kirishtaanka. Weyna Ka aqbashay.
Muddo kadib waxa ey Ka guureen Mogadishu, waxa eyna degeen Dalka Talyaaniga dhowr sanno kadib Haweeneydii Somalidu waxa ey Ku dhimatay Talyaaniga iyada oo ah kirishtaan, waxaana lagu aasay qabuurha gaalada.
Dhowr sanno Kadib ayaa gaalkii gabay Haweeneyda Soomaalidu uu islaamay waxa uuna dhintay isaga oo Muslim ah, waxaana lagu Aasay qabuurha Islaamka.
Aakhiro waxa ey la kulmayaan Allaa og, Laakin waa taa sababta aan Anigu mar kasta idiinkugu soo Qoro khaatumada ALLA ha noo suubiyo.
FG: fadlan haddii aad taqaan Haweeneydaa, Magaceeda ha soo qorin,waan ogahay in qaarkiin ey yaqaaniin ama ey qaraabo ahaayeen.
Khaatumada khayr ALLA ha nooga dhigo.